Mutungamiri weMDC-T, VaDouglas Mwonzora, Vanodoma Makurukota Avo
Mutungamiri weMDC-T, VaDouglas Mwonzora
Mutungamiri weMDC-T, VaDouglas Mwonzora, nemusi weChina vakadoma makurukota ehurumende yebato ravo kana kuti shadow ministers makumi maviri nematanhatu, pamwe nemamwe gumi achange ari makurukota ematunhu, kana kuti provincial ministers.
Vamwe vevakadomwa kuve makurukota vanosanganisira VaMorgen Komichi, avo vakadomwa kuve gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika; VaTapiwa Mashakada vari gurukota rezvehupfumi; Dr. Ruth Labode segurukota rezvehutano; Amai Paurina Mpariwa vari gurukota rezvevashandi nemabasa, kuchitiwo VaPeter Moyo vachidomwa segurukota rinoona nezvekugadzikana kwenyika.
Mwanakomana wevakave mutungamiri weMDC wekutanga, mushakabvu VaMorgan Tsvangirai, VaVincent Tsvangirai, vakadomwawo kuve gurukota rinoona nezvevechidiki, mitambo netsika.
Vakadomwa kuve makurukota ematunhu vanosanganisira VaMorgen Femai, avo vachange vari gurukota redunhu reHarare; VaGift Konjana vari gurukota redunhu reMashonaland West; Amai Jane Chifamba vari gurukota reMashonaland East; VaGift Chimanikire vari kuMashonaland Central, kuchitiwo VaGiles Mutsekwa vari gurukota redunhu reManicaland.
Mutauriri waVaMwonzora, VaLloyd Damba, vanoti mutungamiri webato ravo akatora danho iri achitevera kodzero dzinowanikwa munyika ine hutongo hwejekere idzo dzinobvumidza mapato anopikisa kuti aumbewo dare remakurukota rinenge richiona kuti hurumende yemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa iri kushanda sei.
Hurukuro naVaLloyd Damba